ဂေဇက်ထင်ရှားပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ သတင်းများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ဂေဇက်ထင်ရှားပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ သတင်းများ
ဂေဇက်ထင်ရှားပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ သတင်းများ
Posted by စိန်ကြက်ဆင် on May 21, 2012 in Aha! Jokes, Satire | 49 comments
၂၈.၄.၂၀၁၂ မှ ၁၄.၅.၂၀၁၂ အထိ
၂၀၁၂၊ ဧပြီလ ၂၇ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် အဲယားပူစီ (Air Pussy) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကြောင်ကြီးမှ ၂၀၁၅ သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ရွေးကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုများအား သူ၏မျိုးဆက် ကြောင်လေးမှ ဆက်လက် လုပ်ကိုင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ဦးကြောင်ကြီးလက်အောက်တွင် ကြောင်ထရေးဒင်း(Cat Trading)၊ပူစီယူနိူက်တက် အက်ဖ်စီ(PUFC)နှင့် ပူစီများကြီးထွားရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘဏ်(PGD Bank)၊ပူစီကွန်စထရက်ရှင်ဂရု(Pussy Construction Group) အပါအ၀င် အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် ၀န်ထမ်းအင်အားမှာ ထောင်ဂဏန်း ရှိသဖြင့်ထောက်ခံ အားကောင်းနိူင်ကြောင်း သူနှင့်မကင်းမရှင်းသော အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ ကြားသိရသည်။မတ်လအတွင်းကလဲ ကြောင်လေးမှာ(ECU) ဥရောပကြောင်သမဂ္ဂနှင့် အမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ရာ အနိူင်ရရှိထားသဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပြည်ပရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများ ကျယ်ပြန့်စွာ ဆက်လက်လုပ်ကိုင် နိူင်တော့မည် ဖြစ်သည်။
ကိုးကားသတင်း Pussy Weekly News, April 28
မြန်မာပြည်ဖွား ကြောင်တရုတ်လူမျိုး စီးပွားရေးလုပ်းငန်းရှင်၊ ကြောင်များစက်ဘီးတွန်းအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ကြုတ်ဝတောင်အား အထူးသစ်ကိုင်း(Special Branch)နှင့် ဆောက်ရမ်း၊ဆောက်တလွဲ၊ဆောက်သုံးမကျ ဦးစီးဌာန(ဆဆဆ )ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိ ဆာက်ထုံချုပ် အောင်ပုတိုက်မှ ကြောင်ဝတုတ်ဂိုဏ်းနှင့် ပတ်သတ်မှုများအား အပြီးတိုင်ဖော် ထုတ်နိူင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ပည်တွင်းပြည်ပ သတင်းမီဒီယာများအား တရားဝင် ထုတ်ဖော်ပြောကြား သွားခဲ့သည်။အဆိုပါ ကြောင်ဝတုတ်ဂိုဏ်းသည် ၂၀၁၁ခုနှစ်အတွင်း အလွန်ရေပန်းစားခဲ့ပြီး တရားမ၀င် နွားစာမြက်ရိတ်ခြင်း၊ ရပ်ကွက်များအတွင်း တရားမ၀င် အမှိုက်ကောက် ခံခြင်းနှင့် သင်္ကြန်ကာလများအတွင်း ရေသန့်ဗူးခွံများကို ကျုံးထောင့်၊လမ်းထောင့်များ၌ တရားမ၀င်အ၀ယ်ဒိုင်များ ဖွင့်လှစ် ခဲ့ခြင်းကြောင့် ပြည်သူလူထုအကြား ကျော်ကြားခဲ့သည်။
သတင်း ဆောင့်ကြောင့်ဂျာနယ်, April 29, 2012
ကမ္ဘာကျော်တီးဝိုင်း MG Band မှ ပင်တိုင်အဆိုရှင် အာဂ(ခ)Ar Ni Gaသည် လည်ချောင်းသွေးစုနာ ရောဂါကြာင့်ဆေးကုသမှု ခံယူရန် ၆လခန့် အနားယူမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သော်လည်း လာမည့် မေလ(၁)ရက်နေ့ မေဒေးနေ့တွင် ဧရာဝတီတိုင်း၊ပန်းတနော်မြို့အစုကြီးရွာရှိုးပွဲ၌ လာရောက် သီဆိုမည်ဟု သတင်းရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါသတင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ အဆိုတော်အာဂ၏ မန်နေဂျာ မကောက်ကောက်နွယ်ပင်မှ”ဒါတွေက ကောလဟာဟတွေပါ ကိုGaက သီချင်းဆိုရင် မုထ်ဝင်အောင် ရှက်နည်းနည်းတွတ်ပေမဲ့ တခါတရံ အရက်နာကျပီး လည်ချောင်းယောင်တာလောက် ဖြစ်တတ်တာပါ လည်ချောင်းသွေးစုနာဆိုတာ မဖြစ်နိူင်တာပါ သူ့ကို မနာလိုသူတွေက ကောလဟာလတွေ လွှင့်နေတာပါ မသကာ ပါးစပ်မှာ လိပ်ခေါင်းလောက်ဆို လူကြားကောင်းပါသေးတယ်ရှင့် “ဟု DFA(Drinker Free Asia) သတင်းထောက်အား ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။MG Bandသည် လာမည့်မေလ အတွင်း တောင်ဆူဒန်၊ ဆီးရီးယားနှင့် ဂျပန်နိူင်ငံ ကျိုတိုမြို့များတွင် ဖျော်ဖြေရန်ရှိပြီး ဒရမ်သမား ရွဲစီမှာ အရက်နာကျ၍ ယင်းဖျော်ဖြေပွဲများသို့ မလိုက်ပါနိူင်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ကိုးကားသတင်း DFA (Drinker Free Asia) News, April 30, 2012
ပြည်သူများဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး ဦးသူရဂဇော်သည် မေလ(၂)ရက်နေ့က စင်္ကာပူနိူင်ငံသို့အလည်အပတ် ရောက်ရှိနေပြီး နှစ်နိူင်ငံစီးပွားရေးနှင့် ပြည်သူများဆက်ဆံရေးကဏ္ဍများအား အလေးပေး ဆွေးနွေးခဲ့ကာ စင်္ကာပူနိူင်ငံ ဂေလမ်းထဲတလျှောက် ပြည်သူဆက်ဆံရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေမှုများကို လက်တွေ့သွားရောက် လေ့လာခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိခဲ့သည်။
သတင်း မောတုန်သတင်းဂျာနယ်, May 2, 2012
ယခုနှစ်လည်ပိုင်းတွင် ပြောင်းလဲတော့မည့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးနေရာတွင် စကော့တလန် ဂျော်နီဝါကားတက္ကသိုလ်ဆင်း ဒေါက်တာဘလောချက်မှာ ထိပ်ဆုံးမှရေပန်းစားနေကြောင်း သူနှင့်ပတ်သတ်သော ဆရာဝန်များ၊၀န်ထမ်းများ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ ကြားသိရသည်။အဆိုပါသတင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ မီဒီယာ များမှ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ရာ ယခုတလော ဆေးရုံဆေးခန်းများ၊ ဆရာဝန်၊ဆရာမများနှင့် တိုက်ရိုက် ထိတွေ့ပတ်သတ်နေရကြောင်း၊ ကိုယ်တိုင်ကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်းကြောင့် အားလုံးနှင့် အဆင်ပြေပါကြောင်း၊ အောက်ခြေပိုင်း လိုအပ်ချက်များကို များစွာတွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ ဆေးဂွင်ဖန်တီးခြင်း ကိစ္စရပ်များကို များစွာတွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ ဆရာဝန်၊ဆရာမများမှာလည်း အများပြည်သူထင်သလို မဟုတ်ပါကြောင်း ဆရာဝန်ကြီးများ ကိုယ်တိုင်လည်း တရက်လျှင် ၂၄နာရီပတ်လုံး ဆေးရုံ၊ဆေးခန်း ၂၄၀ခန့်အား သွားရောက်၍ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ ပြုလုပ်နေရကြောင်း၊ အသပြာမလို စေတနာ အပြည့်ဖြင့် လူနာတစ်ဦးလျှင် ၂မိနစ်နှုန်း ကုသမှုပေးနေကြောင်း ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
သတင်း7Ways Journal, May 3, 2012
မေလ(၄)ရက်နေ့ မနက်ကဂျပန်နိူင်ငံမှ ခေတ္တရောက်ရှိနေသော ဂျပန်နိူင်ငံ ဆီးပွားရေးနှင့်ယင်ထီးမြှပ်နှံမှုကော်မရှင် ဈေးကွက်ဆီးပွားရေးဆိုင်ရာ ထိပ်တုံးအရာရှိ မစ္စယာမကာအင်ဇာဂီအား ပြည်သူ့လွှတ်တော်မလိုအပ်အမတ် ဦးမတ်မင်းမှ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ၂နိူင်ငံဆီးပွားရေးနှင့်ဆီးသွားရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို အပြန်အလှန်ထုတ်ပြရှင်းလင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ထို့နောက် မစ္စတာယာမကာအင်ဇာဂီမှ ၈ျပန်နိူင်ငံနှင့်ဆီးပွားရေးအတွက် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး ကလေးများပါမကျန် ဘီယာများများ သောက်သင့်ကြောင်း၊ မြန်မာနိူင်ငံနှင့် ယင်ထီးမြှပ်နှံမှု အပေါ်တွင်လည်း အလွန်ပင် အရေးထားပါကြောင်း မြန်မာနိူင်ငံသည် ရှေးမဆွကပင် သရက်သီး အလွန်စားကြသဖြင့် ယင်ထီးမြှပ်နှံမှုအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းမည် ထင်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး လွှတ်တော်မလိုအပ်အမတ် ဦးမတ်မင်းမှ ဆီးသွားရေးကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သတ်၍ ၀င်ဒါမီယာ၊အင်းယားလမ်း အစရှိသည့် နေရာများတွင် အများပြည်သူနှင့် သက်ဆိုင်သော ဆီးသွားရေးကိစ္စများအတွက် ဆီးသွားရေးစင်တာများ ဆီးသွားရေးကွန်ယက်များ တည်ဆောက်နေမှုအပေါ် ဂျပန်နိူင်ငံမှ ရင်းနှီးမြှပ်နှံခြင်း ပြုလိုမလိုအား ဆက်လက်မေးမြန်းရာ မစ္စတာဂီမှ အလွန်မှသင့်တော်ပါကြောင်း မြို့လယ်အချက်အချာ နေရာများတွင် ယင်းကဲ့သို့ ဆီးသွားရေး ကိစ္စရပ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အခြေခံအဆောက်အအုံများ များစွာလိုအပ်ကြောင်း လူတစ်ဦးတစ်ယောက် နေထိုင်ယုံအတွက်တည်းဖြင့် အိမ်မြေရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုမှာ ငွေးကြေးသန်းပေါင်းများစွာ ဖောင်းပွမနေသင့်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။ယင်းနောက် မစ္စတာဂီဂီနှင့်အဖွဲ့သည် ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ဆီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဆောက်လုပ်ထားသော ဘီယာစတေရှင်များအား လှည့်လည် ပတ်သောက်ကျပြီးနောက် မေလ(၅)ရက်နေ့ ညနေ ၅နာရီခွဲ အချိန်ခန့်တွင် ရန်ကုန်မြို့မှ ဂျပန်နိူင်ငံသို့ ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
သတင်း ဈေးကွက်ဆီးပွားဂျာနယ် May 4, 2012
ဘောလုံးပွဲလောင်းအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကမ်းကမ်းသည် မေလဆန်းမှ စတင်၍ အများပြည်သူများ ဖုန်းကိုင်ဆောင်နိူင်ရန် အတွက် သူပိုင် ငမိုးရိပ်ချောင်းဘဏ်နှင့် ချိတ်ဆက်ကာ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ၀ယ်ယူနိူင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြည်းတွင်းမီဒီယာများအား ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။အဆိုပါ သတင်းနှင့်ပတ်သတ်၍ ဥက္ကကြီးဘက်ကတော့ အများပြည်သူအတွက် ရည်ရွယ်ပီး လုပ်ပေးတာပါ ဘဏ်ကအရစ်ကျ ၀ယ်ယူပြီး ဖုံးခေါ်မရတာတို့ လိုင်းကြပ်တာတို့ စတဲ့မအူမလည် နည်းပညာပိုင်းတွေကိုတော့ တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပေးသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး ဒီအပိုင်းကိုတော့ ဆက်အစုတ်သွယ်ရေးကဘဲ တာဝန်ယူနေတာပါ ကျနော်တို့ဘဏ်တွေ ဘက်က ဖုန်းအလုံးရေ နှစ်သောင်းစာလောက် ကြိုတင်ပေးချေပီးပါပီ မရောင်းရလဲ ရှိသမျှဝန်ထမ်းတွေကို PGD Bankဥက္ကဋ္ဌ ဦးကြောင်ကြီး လုပ်သလို အလကားပေး လိုက်ယုံပါဘဲ” ဟု ဘဏ်တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးမှ ပြောကြားသွားခဲ့သည်။အရစ်ကျလာဝယ်သူ အန်တီMaMaမှလဲ “အန်တီကပေါ့နော် အိမ်မှာပေါ့နော် ဖုန်းမရှိလို့ပေါ့နော် မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော် ဟိုအရင် သူတို့တွေ ၁၅သိန်း သိန်း၂၀လောက်နဲ့ လိမ်ရောင်းနေစဉ်ကတည်းကပေါ့နော် ၀ယ်လာခဲ့တာပေါ့နော် အခု၂သိန်းကျော်အထိပေါ့နော် ဆိုမာလီမှာတောင် မသုံးတဲ့ စီဒီအမ်အေ ၄၅၀ ဆိုလဲ အန်တီတို့ဝယ်သုံးလာခဲ့တာပါ အခုလဲ အိမ်မှာက အန်တီ့ မြေးလေးမှာတောင် ဖုံးရှိပါတယ် အခုအရစ်ကျ လာဝယ်တယ် ဆိုတာပေါ့နော် အိမ်ကို ရေသန့်ဘူးလာလဲတဲ့ ကလေးတွေကို သနားလို့ ၀ယ်ပေးမလို့ လာခဲ့တာပါ ဟုပြောကြားသွားခဲ့သည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာသော အစုတ်သွယ်ရေးမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ကျနော်တို့ အနေနဲ့ကတော့ ပြည်သူတွေကို ဈေးကောင်းကောင်းနဲ့ ၀န်ဆောင်မှု ကောင်းကောင်းပေးချင်ခဲ့တာပါ အခုလဲ ကျနော်တို့ လိုင်းတွေကောင်းအောင် လုပ်နေပါတယ် အနည်းဆုံးလမ်းတစ်လမ်းကို တာဝါတိုင်တစ်တိုင် တပ်ဆင်နိူင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ် ဒါပေမဲ့ မြေနေရာ အခက်အခဲကြောင့် ဓာတ်တိုင်တွေကို ၀ါးလုံးနဲ့အပေါ်ကနေဆက်ပီး လိုင်းတွေထပ်ချဲ့ပေးဖို့ ပြင်ဆင်ထားပါတယ် မကြာခင်မှာဘဲ လိုင်းတွေကောင်းလဲမှာပါ ဟုပြောကြားသွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။တဆက်တည်းမှာပင် ငမိုးရိပ်ဘဏ်နှင့်ကမ်းမြန်မာ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကမ်းကမ်းသည် မေလ ၅ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက ဆောက်ကမ်းFC ဘောလုံးအသင်းအား သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး မြန်မာမသေမရှင်လိဒ့်ပြိုင်ပွဲ အတွက် ပြင်ဆင်နေမှုများအား ကြည်ရှခဲ့ပြီး အားကစားသမားများအတွက် ဘီအီးနှင့်ရုံးပတေသီးကင်များ ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
သတင်း High Drink Sports News, May 5, 2012
နိူင်ငံကျော် စာရေးဆရာမ ဆူးမမစူး၏ “ဆူးတို့နဲ့ ပလာယာ”၀တ္ထုအား တသက်တာစာမွှေဆုချီးမြှင့်ခြင်းနှင့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရိုက်ကူးရန် ကတော့ပွဲပေး အခမ်းအနားကို ကုန်သူကြီးများဟိုတယ် ကတောင်း၊ကုန်းပြောင်ခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ရှေးဦးစွာ စာရေးဆရာမဆူးမမစူးက ယင်းဝတ္ထုဖြစ်ပေါ်လာပုံနှင့် မည်သို့ခံစားရေးဖွဲ့ ဖြစ်ပုံတို့ကို အတိုချုံးဖွဲ့နွဲ့ ရှင်းပြသွားခဲ့ပါသည်။ယင်းနောက် စာရေးဆရာ၊ဒါရိုက်တာ အကယ်လမီ ကြိုက်မီးမှ ယင်းဇာတ်ကားအား ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖြစ်ပုံနှင့် ပတ်သတ်၍ “အိမ်အပြန် ကြိုက်တဲ့ အမြည်းလေးဝင်ဝယ်ရင်း စာအုပ်တွေ့တာနဲ့ နောက်ကနေ စဖတ်မိလိုက်တယ် ဖတ်ကြည့်ရင်း မူးသွားတာမို့ မဆိုးဘူးဟ ဒီစာအုပ်လေးဆောင်ထားရင် ဘီအီးဖိုးမကုန်တော့ဘူး ဒါနဲ့စာအုပ်ဝယ်ရင် ပိုက်ဆံကုန်တာမို့ ရပ်ကွက်ထဲရောက်မှ ကလေးတယောက်ကို လမ်းထိပ်က စာအုပ်ဆိုင်မှာ သွားငှားခိုင်းပီး ပြန်မပေးဘဲ သိမ်းထားလိုက်တာ ဟောသူလည်း ဆုရတော့ နေပူတော် ကန်စွန်းရွက်ခင်း စာအုပ်တိုက်က သူဌေးရွာဇယားကျော်က ရုပ်ရှင်ရိုက်ချင်တယ် ဖြစ်လာရော ဒါနဲ့ဘဲ ဟိုMG Bandကဂစ်တာသမား၊ဇာတ်မင်းသား၊အရက်သမား ရေဖြဲတိုက်ကို မင်းရိုက်မလားမေးတော့ ဦးကြိုက်ကျနော့်ကို မရိုက်ရင် ဦးကြိုက်ကို နှစ်တစ်နဲ့ ပြန်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ ကြောက်ပီးခေါ်လိုက်ရတယ် နောက်မင်းသမီး ကျတော့ ဟိုအဆိုတော်၊ရုပ်ရှင်မင်းသမီး အီးတုံးဝေက သူ့နှတ်ခမ်းမွှေးတွေကို ကိုရီးယားမှာ လေဆာနဲ့သွားနှတ်ပီး ပြန်လာစဆိုတော့ ရေခန်းနေချိန် နောက်သူ့နဲ့ရိုက်ရင် သူ့အနုပညာကြေးထဲက ကော်မရှင်ဖိုက်ပါဆင့်ပေးမယ်ဆိုပီး အိမ်မှာဘလူးလေဘယ် အတုနဲ့လာလာဘ်ထိုးတော့ လက်ခံဖြစ်သွားတာ ဟုအကယ်လမီ ကြိုက်မီးမှ မချေမငံရှင်းပြသွားပါသည်။ ထို့နောက် အဆိုတော်၊မင်းသမီး အီးတုံးဝေမှ သူ၏တကိုယ်တော်စီးရီး “အိမ်သာတွေနေတဲ့အရပ်”တေးစီးရီးကို ဆက်လက်မိတ်ဆက် သွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
အတင်းကြမ်းဂျာနယ် မေလ ၇ရက်၊၂၀၁၂
အင်တာနက်မြို့နယ်၊အွန်လိုင်းကျေးရွာအုပ်စု မန်းဂေဇက်ကျေးရွာ၌ နှစ်ဖက်သော ကျေးဇူးရှင်မိဘများနှင့် ဆရာသမားများကိုအမှူးထား၍ ဂဇက်ရွာသူရွာသားများအား ကျေးဇူးတုန့်ပြန်ခြင်းငှာ ကျေးရွာသူကြီး သီရိသုဓမ္မသဂ္ဂီ ဦးခိုင်နှင့် သမ္မီးချာတူးခိုင်တို့အား သာသနာ့ဘောင်သို့ သွတ်သွင်းခြင်းကို မေလ (၉)ရက်နေ့ နံနက် ၁၀နာရီခန့်က ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ယင်းနောက် အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ဦးပါလေရာက ဆောက်ရွက်ပြီး အဆိုတော် အန်တီပဒုမ္မာ၊ အန်တီTTNUနှင့် အရီးခင်လတ်တို့မှ သူကြီးကိုလိမ္မာစေရန် ဓမ္မတေးများဖြင့် နှစ်သိမ့်ပါတယ်။အခမ်းအနား အစီအစဉ်အရ သူကြီးဦးခိုင်အား ရဟန်းအဖြစ်သို့ ရောက်စေပြီးနောက် ရွာဦးကျောင်းဆရာတော် ဦးဝိမလ(ကြိမ်လုံးဆရာတော်)(လူအမည် မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု)မှ ဇိမ်ဝါဒီ အမိုက်မှားနောက် လိုက်မသွားကြစေဖို့ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် တရားရေအေးတိုက်ကျွေးပါတယ်။ထို့နောက် တက်ရောက်လာသူများ အဘဖောမှ စဉ်းစာကြစေလိုပါတယ် (ရွာသူရွာသားတို့) ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားခဲ့ပြီး အခမ်းအနားကို ရုတ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ညချမ်းအချိန်ခါမှာတော့ ပန်တရာမောင်ပေ၊ မန်ဒလာလာမယ်ပုတို့ ဇာတ်သဘင် နှင့်အတူ လူရွှင်တော် ဗိုက်ကလေး၊အညစ်ရောင်၊ထုံးဘဲဥတို့မှ ဟာဒယရွှင်ဆေးများတိုက်ကြွေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မန်းဂေဇက်သတင်းစဉ် မေလ ၁၀ရက်၊ ၂၀၁၂
မေလ(၁၅)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် လူငယ်ဒါတ်ပုံ ဆရာအမှောင်လူးလဲ၏ တကိုယ်တော်ဒါတ်ပုံပြပွဲ ကြိုတင် စာနှယ်စင်းရှင်းလင်းပွဲအား ရန်ကုန်မြို့ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းရှိ ရူးနှမ်းစားသောက်ဆိုင်တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ သတင်းမီဒီယာများ၊ ဒါတ်ပုံဆရာများနှင့် ၀ါသနာရှင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ထို့နောက် အခမ်းအနားမှူအဖြစ် ဒါတ်ပုံရှည်မင်းသား(မတလ)မှ ဆောင်ရွက်ကာ ဒါတ်ပုံဆရာ အကယ်လမီပန်း၁ထွာ(ပေါက်ညွန့်)မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပြီး ဒါတ်ပုံအမှောင်လူးလဲမှ ပြပွဲပြုလုပ်ရသည့် အကြောင်းရင်းအား ရှင်းလင်းသွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ယင်းနောက် တက်ရောက်လာသူများကို ဒါတ်ပုံအမှောင်လူးလဲမှ ပြပွဲအကြိုအဖြစ် လျှက်တပြွတ်ရိုက်ချက် အချို့အားပြသခဲ့ပြီး အခမ်းအနားကို ရုတ်သိမ်းလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
လျှက်တပြွတ်ဂျာနယ် မေလ ၁၃ရက်၊ ၂၀၁၂
မေလ(၁၃)ရက်နေ့ ညနေ ၃နာရီခန့်က နယ်စည်းမခြားအရက်သမားများသမဂ္ဂ နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားအား မန်းလေးမြို့ သုဓမ္မာဇရပ်တန်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ယင်းအခမ်းအနားသို့ နယကကြီး ဒါရိုက်တာကြိုက်မီး တက်ရောက်ခဲ့ပြီး သြ၀ါဒစကားများ ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ထို့နောက် သမဂ္ဂအကြံပေးအရာရှိ ဒေါက်တာဘလောချက်မှ အရက်သောက်သုံးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိူင်သော ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများအား တင်ပြသွားခဲ့ပြီး အတွင်းရေးမှူး ဦးတွမ်တီးCupsမှ သမဂ္ဂရံပုံငွေနှင့် ဘဏ္ဍရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ရှင်းလင်းသွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ တက်ရောက်လာသူများ ကိုယ်စား ဦးအမူးမင်းနှင့် ဦးသူရဂဇော်တို့ကလည်း “နည်းနည်းသောက် များများမမူးရေး၊ ဆိုင်မှအပြန် ဇာတ်လမ်းမဆက်ရေး၊ ရေတိုထက် ရေရှည်အကျိုးကြည့် မျှင်းသောက်ရေး၊ အိမ်မပိုင်ဘဲ ဂေါ်လီမလုပ်ရေး”စသည့် မူဝါဒဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ထည့်သွင်းဆွေးနွေးသွားခဲ့ပြီး ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဦးအာဂသူရာမှ တသက်တာအရက်သမားဆုအား ကိုသောက်ကြမ်းကမ်းအားလည်းကောင်း၊ သူရာသောက်ကြူး လူမူးထူးချွန်(ပထမ)အဆင့်အား လျှောက်မူးရဲစည်အားလည်းကောင်း ချီးမြှင့်ခဲ့ပြီး ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မဟာအရက်မင်းကြီးရုံး ဌာနေကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာဗေးကလိုက်မှ ဂုဏ်ပြု စကားပြောကြားသွားခဲ့ပြီး အခမ်းမနားကို ည ၈နာရီခွဲခန့်တွင် အောင်မြင်စွာ ရုတ်သိမ်းလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
New NgaMooe Weekly Journal, May 14, 2012
စာပြည့်အောင်.. ဖြည့်တင်ပေးပါဆိုလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
.. စာပါ.. အကြောင်းအရာတွေ.. လက်ခံတာ.. တာဝန်ယူတာမဟုတ်ပါ..
အထဲကစာတွေက..Jokes, Satire ဆိုပေမဲ့.. ရွာသူားအချင်းချင်း.. အပြင်ဘယ်လောက်ခင်မင်သလဲ.. ဘယ်သူဘာတွေလည်း..ကိုရင်က.. သေသေချာချာသိသလား.. မသိသလား.. ကျုပ်လည်း..မသိပါ..
ဆိုင်ရာသူတွေက ကန့်ကွက်လာရင်.. တောင်းပန်တာ.. ဖြေရှင်းတာလုပ်ရမှာနော…
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့.. ရွာသူားအချင်းချင်း.. လွတ်ကင်းကင်း..Satire ရေးစေချင်တာပါပဲ..။
ကျုပ်ကိုတေ့ာ.. ဘာရေးရေး.. ပြဿနာမရှိ…
ကျုပ်ကိုလဲ ဘာရေးရေး ပဿနာမချိ..အဟိ
ဂျက်မတို့ဂျက်လီတို့လာပွမ်ရင်တော့ လွတ်အောင်ပြေးပဒေါ့
အခုလို စာအပြည့်တင်ပေးတဲ့ အတွက်ရယ် သတိပေးတဲ့ အတွက်ရယ် ကျေးဇူးပါခင်ဗျ…..
အားလုံးလည်း လက်ခံနားလည်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်..
ကျနော့် Sweet Satire လေးကိုက ဖတ်ပြီး ခပ်ချဉ်ချဉ်လေး ပြုံးစေချင်တာပါ
ကျနော်တို့ မတွေ့ဖြစ်တဲ့ အတွက် နောင်တချိန်မှာ ဆုံဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်….
လောလောဆယ် ရှောင်သိုင်းကွက်တွေ မလိုသေးဘူးထင်ပါတယ်…………
အံမယ်လေး မောင်ရဲစည်ရယ်.. ခပ်ချဉ်ချဉ်တော့ မပြုံးနိုင်ပါဘူးကွယ်…..
ကျုပ်ကတော့ နောက်တာကို နောက်တယ်လို့ မြင်ပေးပါတယ်ဗျ..
ဒိထက်ကောင်းလာမဲ့ Satire မျိုးကိုလည်း မျှော်လင့်ပါကြောင်းနှင့်
အားလုံးလည်း နိုးပလုံပလုံ ဖြစ်ကြမယ်..ထင်ပေးပါ၏..
တရားဝင်ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါကြောင်း. မသောက်တတ်ဘဲ မူးနေသူများ သိစေရန် ကြေညာမှုပြုအပ်ပါသည်..
အားပေးသွားပါတယ် ဗျာ ..:D
lock star မှာလေ…………
တိုရဲစိ လုပ်မှပဲ အညစ်ရောင်ဖစ်တော့ဒယ်အေ
အဟမ်း အဟမ်း..။ ကျွန်တော်အနေနဲ့ ပြောရမယ် ဆိုရင် အဟမ်း..အဟမ်း…။ ကျွန်တော်တို့ ဟမ်း ဟမ်း နယ်စီးမခြား အရက်သမား သမဂ္ဂ အဖွဲဝင်တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှု၊ အဟမ်း အရက်သမား များရေရှည် အကျိုးအတွက် အဟမ်း အဟမ်း..ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို အဟမ်း (((ဟေ့အောက်က တရုတ်ပြည်သမဂ္ဂ၀င်ချာတိပ် အရက်စည်လေး ဥက္ကဌကို အရက် နှစ်ပတ်လောက်ထည့်ပေးစမ်း))) အဟမ်း အခုမှပဲ လည်ချောင်းရှင်းသွာတော့တယ်။ ဒါနဲ့ စကားဘယ်ရောက်သွားပြီလည်း အော် လုပ်ငန်းဆောင်တာများအကြောင်းအခုလိုရေးသားပေးတဲ့အတွက် မောင်ရင့်ကို ကျွန်တော်တို့ သမဂ္ဂမှ သတင်းနှင့် စာနယ်ဇင်း ဆိုင်ရာ ညွန်ကြားရေးမူး ချုပ် အဖြစ်ခန့် အပ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီအဆိုကို သမဂ္ဂ၀င်များ၊ ကန့်ကွက် မှုများပြုလိုပါက ၇ စက္ကန့်အတွင်း ရေးသားကြရန် အကြောင်းကြားအပ်ပါတယ်။ ၇ စက္ကန့်ထက်နောက်ကျရောက်လာတဲ့ အဆိုပြုလွာမျာကို အဟမ်း((( မန္တလေးသမဂ္ဂ၀င် ဖရဲမ ဥက္ကဌကြီးကို အမြည်းနည်းနည်းလုပ်ပေးဦး))) ဂဂျွတ် ဂွတ်… အဟမ်း နောက်ကျတဲ့ အဆိုပြုလွာများကို လက်ခံစဉ်းစားပေးမည်မဟုတ်ဟု အတိအလင်း ကြေငြာအပ်ပါတယ်။
မှတ်ချက် နာယကကြီး ဦး ကြိုက်မီး၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးတွမ်တီးCups၊သမဂ္ဂအကြံပေးအရာရှိ ဒေါက်တာဘလောချက် တို့၏ထောက်ခံခွင့်ပြုချက်ဖြင့်။
အာဂသူရာ (ဥက္ကဌ နယ်စည်းမခြား အရက်သမားများသမဂ္ဂ၊မြန်မာပြည်ဌာနေကိုယ်စားလှယ်။)
ချွဲသလိပ်ကင်းဝေး ကျန်းမာရေး ဖလီးမစ်စ်ကို သောက်သုံးပေး
ဖလီးမစ် သောက်လို့ မပျောက်ရင်
စောလဗျွတ်စ် ဆိုတဲ့ ဆေးလည်းရှိသေးတယ်..
အသင်လုပ်မှ ကျွန်ုပ်ကြောင်ဝတုတ်ဂိုဏ်းသည်လဲ သူတောင်းစာဂိုဏ်းသာသာဖြစ်တော့သည်…
ကျွန်ုပ်နှင့် ကျွန်ုပ်ဂိုဏ်းသားများအပေါ် ယခုကဲ့သို့အရေးတယူပြုပြီး သတင်းထဲထည့်သွင်းပေးခြင်းကြောင့်
ကျေးဇူးဥပကာယတင်ရှိသော်လည်း ဂိုဏ်း၏သတင်းများပေါက်ကြားမှုဖြင့်တော့ ကျွန်ုပ်၏ဂိုဏ်းသားများရန်မူခြင်းကိုခံရနိုင်သည်။
သင့်အားအပြစ်ဒဏ်အဖြစ်… အရက်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်သတ်မှတ်၏…
နယ်စည်းမခြားအရက်သမားများသမဂ္ဂအား ဖျက်သိမ်းရန်အတွက်လည်း အဆိုတင်သွင်းလျက်ရှိနေပြီ…
နိုင်ငံတကာမှ ကြောင်ဝတုတ်ဂိုဏ်းဝင်ဆဲလစ်ဗစ်တီးများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာအား နွမ်းပါးစေနိုင်သောကြောင့်
ဘယ်သူဖျက် ဖျက် တို့ မဖျက် အမြဲ စည်းလုံးမည်။
အရက်သမား သမဂ္ဂအား သွေးခွဲလာသူတို့ရန်သူ။
အရက်မသား သမဂ္ဂမပျက်စီးရေး ……….ဒို့အရေး
သွေးစည်းညီညွတ်စွာ သောက်သုံးမှု မပြိုကွဲရေး….ဒို့အရေး
အသောက်ဝါသနာ ။ အရက် အာဏာတည်တံခိုင်မြဲရေး….ဒို့အရေး
မိန်းမအားကိုး ပုဆိန်ရိုး အဆိုးမြင်ဝါဒီများအားဆန့်ကျင်ကျ
အဲလိုလဲ ဟုတ်ဘူးလေဂျာ အူးလေးဂိုဏ်းကို နောက်ချင်လို့ ပြောင်းပြန်လုပ်တော့ ဒီ အိုင်ဒီယာကြီး ထွက်ကျလာတာပါ…..ဆောလတီး…ဆောလတီး အူးဖပ်ရာ..နော်..
စတာနောက်တာဆို တားက အဲလဗား ခွင့်လွှတ်တယ်..
ကျွန်တော်တို့က ပျော်လို့သောက်ကြ ရွာသားတွေတွေ့ဖို့
စီစဉ်ကြပေမယ့် အများအမြင်မှာ မြန်မာကားထဲက
ထန်းရေ ဆိုင်အမြဲရောက်နေတဲ့ ကာလသားတွေလို
လူအများ ငြိုငြင်ခံရမှာကြောက်လို့ ဖျက်သိမ်းမယ်လို့
ရွာအင်္ဂါရပ်အရ ထားစေချင်ရင်ဖြင့် ပြန်လည်သုံးသပ်
အခုတော့ အင်ထာမင်း ပျံအုန်းမယ် လပေါ်မှာ ဂြိုဟ်သားတစ်ကောင်သောင်းကျန်းနေလို့တဲ့
ကောင်းတယ် ကြိုက်တယ် ဒါဟာသရေးတာပဲ
ရေးပါ ရေးပါ ။(ကိုယ့်နာမည် မပါတော့ပြောအားရှိတယ်)
ဟားဟား ဆရာထက်နဲ့ အန်စာတုံး အတွက်စာနှစ်ပိုဒ် ရေးပီးမှ ကျန်ခဲ့တာပါဗျ ဒါမို့ပြောအားရှိသွားတာပါ….။ခင်မင်ရင်းစွဲဖြင့်သာ…ဖတ်စေလိုကြောင်း….
အပင်ပမ်းခံပြီး ရေးထားတဲ့ ပို့စ်လေးမို့ ဝင်အားပေးသွားပါတယ်…
ဆြာကြီးများ ၊ဆြာမကြီးများ ရဲ့ ခွင့်လွှတ်ပေးမှုကို ရရှိနိုင်ပါစေဗျား….။
ကျုပ်တောင် အသစ်တပုဒ်ရေးမလား တွေးနေသေး….
ပိုစ့်မော်ဒန် သိုင်းလောက အကြောင်းရယ်…
ဟိုး ရှေးရှေးက စိန့်တိုင်း ကနေ ဆင်းသက်လာတဲ့ ၀ူတန်ဂိုဏ်းအနွယ်အဆက်တွေဖြစ်ပြီး
ကာလဒေသ ကွာခြားတဲ့အတွက် သာ ရသေ့မ၀တ်ကြတဲ့ လူသူတော် ဂိုဏ်းဖြစ်ပြီး
အရက်သေစာ ကို သေတပန်သက်တဆုံး ရှောင်ကျဉ်ကြတဲ့ အကြောင်း…
ညည်းတို့ ကတုံး-၅ဖော် ဂိုဏ်း .. အိမ်ရှင်မဂိုဏ်း အာပျိုဂျီး ဂိုဏ်း နှူးဘာဂိုဏ်း
နှမတော်ဂိုဏ်း မိုးကြိုးဂိုဏ်းနဲ့ ကိုယ်ပျောက်ဂိုဏ်း … အဲ့လိုတွေ အဲ့လိုတွေ ရေးမလို့ဟာ…
သိုင်းလောက ဥသျှောင် မြေဖုတ်ကဝေသိုင်းဆြာဂျီး
စိတ်ထိခိယက်သွားမှာ စိုးလို့ မရေးတာ ဖြစ်ပါဂျောင်း…
(သူ့ကို ရွာတော်ရှင် သိုင်းနဲ့ တဂျွတ်ဂျွတ်ဝါးသိုင်းက ပူးပေါင်း တိုက်ခိုက်တာတွေ
ပြောရရင် ကိုယ့်ပယောဂ မကင်းတာမို့ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။
တဆက်တည်း အားလုံးရဲ့ အပျော်လေးတွေ ပျောက်သွားအောင် လုပ်ခဲ့မိတာကို တောင်းပန်ပါတယ်။
သရော်စာရေးတယ်ဆိုတာ သာမန်ရေးတာတွေထက် ပိုပြီး ခက်ပါတယ်။
(ကိုယ့်ကို ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့အထဲ ထည့်ထားတာမို့)
အိမ်း… ကိုရင်ရဲစည် က တောင်းဆိုလာမှတော့
အဘပေ နဲ့ အဘွားပု တို့ တစ်ချီတစ်မောင်းလောက်တော့ အသုံးတော်ခံရတော့မပေါ့ ။
ကဲကဲ.. ကိုရင်ရဲစည်ရေ ၊ ဘွားပု ကို ပင့်လကွာ ။
ကိုရင်ရဲစည်ရေ ၊ ရယ်ရသဗျာ ။
ကိုရဲစည် .. လူပုံကြည့်ထဲက ပျော်ပျော် နေတတ်မယ်ဆိုတာ သိသာပါတယ်ဗျာ … ဒီလို ရေးတော့လဲ .. အမိုက်စားပါလား …။ ရွာသူ/သား အများစုက ရွာသက်ကြာလာကြတဲ့အခါ တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက်က မောင်နှမတွေလို ရင်းနှီးသွားကြတာကိုး …။ တစ်ချို့ ကတော့ သူ့ အလိုလို ပျောက်ပျောက် သွားကြတာ ဆိုတော့ .. ဒီလို nick လေးတွေနဲ့ ထည့်ထည့် ရေးတဲ့ စာတွေက ကျွန်တော့ စိတ်ထင် မှတ်တမ်း တစ်ခုဖြစ်နေနိုင်တာမို့ … အားပေးပါတယ်ဗျာ။ သူကြီးရေ … ဘာမှ စိတ်မပူနဲ့ .. nick name ယူသုံးတာကတော့ .. အေးဆေးပါလို့ နော့။ ချစ်တဲ့ခင်တဲ့ စိတ်နဲ့ ယူသုံးတာမို့ … ဖတ်ရင်းပြုံးရင်း ..
တတ်နိူင်သလောက်တော့ nick name တွေကို အများကြီးလဲ မရိုင်းအောင်၊နာမည် ပါတဲ့သူလဲ လက်ခံနိူင်အောင် ကြိုးစားပြီး ပြင်ထားတာပါ။ ဒါပေသိ အခုထပ်ရတဲ့ နာမည်တွေ အပြင်မှာ တွင်သွားရင်ဖြင့် ကျနော် တရားခံပါဘဲ…..ဘယ်သူပြုပြု ကျနော့် အမှုပေါ့ဗျာ……….
အားပေးသွားပါကြောင်း။ ဖတ်ရင်းပြုံးမိနေလို့ သူများတွေမြင်ရင်တစ်မျိုးမြင်သွားမှာစိုးတဲ့အတွက်
ဟီးတော် သေးသဟ နို့ မဟုတ်ရင် ပါလာအုံးမယ်။
ကိုရဲစည် မထည့်မိတာ ကံကောင်း၏။ကြိုးစားရေး
ကိုအတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူရေ….မောလိုက်တာ တချို့နာမည်တွေ ကျတော့လဲ ဘယ်လိုမှ စဉ်းစားမရဘူးဗျ အစ်ကို နာမည်ဆို ပိုပြီးတွေးမရလို့ပါ ဟင်းဟင်း…ကံကောင်းသွားဒယ်
ပန်းတစ်ထွာ ပေါက်ညွန့် ကဘယ်သူလဲဆိုတာ စဉ်းစားလို့မရဘူးနော်
ဆောရီးပါ ဦးပေါက်ရယ် …
ဦးပေါက်ကို ပန်းသာ(သန်းညွန့်)နဲ့ တင်စားတာ နည်းနည်း လက်လွန်သွားတယ်..
ကိုပေါက်ဘဝ. လှသွားသပေါ့။ကိုရဲစည် အတွေးနဲ့ အရေးကြောင့်ပေါ့။
ဟီးးးးးသူက လူသိပ်မရသေးလို့ ကြံမိကြံရာသာပြောတဲ့ ရေးသက်ရလာရင်
အခုမှ ပြန်ဖတ်ကြည့်မိလို့ ဝင်ငံဦးမယ်
မြန်မာအတိုင်းအထွာ မက်ရှားမန့် မှာ
တစ်ထွာ = ၆ လက်မ ဆိုကလားဘဲ
အေးချမ်းမေ သီချင်းတောင် နားထဲကြားလာမိတယ်
“ ဒါကို သူမြင်တယ်ဆို ရင်မှာ ပုဏ္ဏားတွေရှိလား ”
ကျနော့် ပို့စ်တွေမှာ ဖတ်တဲ့သူ၊မန့်တဲ့သူ သိပ်မရသေးလို့ ကြံမိကြံရာ လုပ်မိတာပါ ခွှင့်လွှတ်ကြပါ..
သများဂို ရာထူးကြီးကြီးပေးထားတဲ့အတွက် အလွန့်အင်မတန်
၏ သတင်းများဂို အစဉ်တစ်စိုက်
စောင့်မျှော့်ဖတ်ရှုရန် အာသီသ ပြင်းထန်နေဘာသီ
အခုမှ မန့်ဖြစ်တာတော့ ခွင့်လွှတ်ပါ
သရော်စာ အရေးအသား စံအား လေးစားပါ၏….
တစ်သက်တာ အရက်သမားဆုရ ရှင်ကြီး မောင်ကမ်း……
ဟေ့ ၊အပြင်မှာတကယ် ဓမ္မတေးဆိုရမယ့်အခါ လာမခေါ်ရင်တော့ စိတ်ဆိုးမှာနော်။
” အဘဖော မှ စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ရွာသူရွာသားတို့ )
ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားခဲ့ပြီး ”
ထည့် အသိအမှတ်ပြုပေးခဲ့တဲ့အတွက် ကျေးကျေး ပါ ။
ဂေဇက်ထင်ရှားပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ သတင်းများ ဆိုတော့ ဂေဇက် မထင် မရှားပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ သတင်းများ လည်းလာအုံးမယ်ထင်တယ်…ပုန်းနေမှပဲ….
ဟင့် သူလုပ်မှ နာမယ်တစ်လုံး အသစ်ထပ်တိုးတယ် ….
ပိုစ်နာမည် ကြည့်လိုက်တော့ အစက ဂေဇက် နဲ့ စ ထားတော့ လာပြန်ပြီလား ဇောက်ထိုးလားလို့..
လူ တဦးချင်းစီ အပြင်မှာ သိလို့ ရေးတာ ပြသနာ မရှိပေမဲ့ ကျားမှန်း မမှန်း မသိပဲ ပေါက်ကရတွေ ရေးတာတော့ မကောင်းဘူး။ အမှန်တော့ စာရေးတယ် ဆိုတာ စာရေးတဲ့ လူက ကိုယ့်စာကို တာဝန်ယူတတ်ရပြီးတော့ ကိုယ်ရေးတဲ့ အကြောင်းအရာ လှဖို့ သူများ နာမည် အလွဲသုံးစား လုပ်တာ လုံးဝ ကို မလုပ်သင့်ဘူး။ လောကမှာ နာမည်တွေ အများကြိး ရှိတယ်။ နောက်တခါ နာမည်တပ်ရင် ဒေ၀ဒတ်တို့ ဇိန်ဇိမာန တို့ တပ်ပြီး သုံး.. ကိုယ်သုံးလိုက်တဲ့ နာမည် ကို ကိုယ်က လွဲလို့ တခြား လူတွေ အကုန် သိနေတာဆိုရင် လုံးဝ မကောင်းဘူး။ ပြောရရင် အသုံး အနှုန်းတွေ လွန်လာအုန်းမယ်။ ဘုန်းကြီးက ဘုန်းကြီးမှန်း သိမှာ စိုးလို့ လူ့လောက ထဲ ၀င်တိုးပြီး လူတွေ ပြောတဲ့ စကားတွေ လျှောက်ပြောနေတာ ပေမဲ့ စကားအပြော အဆို အဖြတ် အတောက်က လိမ်မရဘူး ဆိုတာ တော့ သိထားသင့်တယ်။ တရားဟောချင်တယ် ဆိုရင် အတည်အတံ့ တရားဟော တရားမဟောနိုင်ရင် တရားစကား မပြောနဲ့ တရားစကားပြောသလိုလို ဆုံးမ သလိုလိုနဲ့ ဘာမှန်း မသိတဲ့ လူတွေ ကို စော်ကားသလို ပြောတာတော့ လုံးဝ မကောင်းဘူး။ ထားပါတော့လေ.. ဒီပိုစ်ကလေး ကိုယ့်နာမည်များ ပါလာပြီး ပြသနာ ထပ်ရှာပြန်ပြီလားလို့ ၀င်လာဖတ်တာပါ။
ရဲစည် ကတော့ ဆူး နဲ့ လည်း သိနေတော့ ဘာမှ မပြောလိုပါဘူး။
သူရေးထားတာ ဘာမှ ထိခိုက်နစ်အောင် ရေးထားတာ မဟုတ်တော့ ပြောစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။
အထက်က ပြောတာတွေက ရဲစည်ကို ပြောတာ မဟုတ်ဘူး သဂျီးက ပြောသွားလို့ တိုက်ဆိုင်လို့ ပြောသွားတာ..
ရဲစိရေ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခင်မင်မပျက်ပါကြောင်း၊ စာကို စာလိုအမြင်နှင့်ဖတ်၍အားပေးသွားပါကြောင်း၊ အားလုံးသည် သူငယ်ချင်းများသာဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြစ်ပါကြောင်း
မျက်နှာမြင်ထားသူ(ကလေးမွေးထားခြင်းမဟုတ်) မို့.. ရာထူးတက်ပေးလိုက်ကြောင်း…
ဟတ်လား သူကြိးကို ဘယ်သူက ရာထူးတက်ပေးလိုက်ပါလိမ်နော် စဉ်းစားရကျပ်လိုက်တာ
တော်လိုက်ဒါ ဒဂါငရဲရရ်…… (မယ်သီလျှံ လေသံဖြင့်)
ဒဂါ့မှာလဲ ရှိသမြအဂျိုအဂျားဂ ညံကာလာစုံကွန့်မျူးထားဒါ အင်မတန်မှဂို လက်ရာမျောက်ပါဗေဒယ်….
အိန်းးးး ကောင်းလေဆွ ကောင်းလေဆွ
အမေရိကန်စစ်တပ်မှာဒေါ့ ကြယ်ငါးပွင့်ဗိုလ်ချုပ်ဆို အမြင့်ဆုံး။ သဂျီးဂ လေးပွင့်ဆိုဒေါ့ ငါးပွင့်ဂ ဘဒူလဲ.. သဂျီးဂဒေါ်လား…။ ကြယ်ငါးပွင့်ဂဒေါ့ မြန်မာပြည်မှာ သင်္ဘောလိုင်း…။
ဂဇက်တော် သင်္ဘောသီးဂျုပ်မှူးဂျီး သဂျီးဂဒေါ် သဂျော်ဂဒီးအား အာလေး……ပြု။ :D